Tsy mahatoky ny fitsarana intsony ny vahoaka malagasy hoy ny filoha Andry Rajoelina - TV plus du 8 aout 2019 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil RANARISON Tsilavo Tsy mahatoky ny fitsarana intsony ny vahoaka malagasy hoy ny filoha Andry...
Tsy mahatoky ny fitsarana intsony ny vahoaka malagasy hoy ny filoha Andry Rajoelina – TV plus du 8 aout 2019
Tsy mahatoky ny fitsarana intsony ny vahoaka Malagasy ka lasa mirongatra ny fitsaram-bahoaka hoy Andry Rajoelina niaraka tamin’ny mpikambana teo anivon’ny Filankevitra ambonin’ny mpitsara androany.
Tsy maintsy haverina ny hasin’ny fitsarana hoy ny filoham-pirenena ka tsy ekena ny fisian’ny fitsarana mitanila. Hisy arak’izany ny fanenjehana ireo mpitsara manao ny tsy rariny sy ny fanasaziana azy ireo hoy hatrany ny fanazavana. Hanafainganana ihany koa ny raharaham-pitsarana rehetra manerana an’I Madagasikara hoy hatrany Aandry Rajoelina.
Fitiavana Dolis. Yves Rasata
Nihaona voalohany tamin’ny mpikambana teo anivon’ny filankevitry ny mpitsara ny CSM ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina androany. Hitaky ny fanadiovana ny sehatry ny fitsarana amin’ireo mpitsara Malagasy ny fanjakana nohon’ny kolikoly sy ny fitsarana mitanila. Tsy misy vahoaka mahatoky ny fitsarana intsony eto Madagasikara hoy ny Filoha. Tsy eken’ny vahoaka ihany koa ny didy avoakan’ny fitsarana sasany ka mampatanjaka ny fitsaram-bahoaka sy mampiroborobo izany ary indrindra ny tsy ahafehezana izany hoy ny filohan’ny Repoblika.
Tia hamerina ny asan’ny fitsarana ny tenako mba ho fitsarana mijoro, matanjaka, madio, mahitsy, mahaleotena, ekena ary hiankinan’ny vahoaka Malagasy. Izany hoe ny faniriana raha atao bango tokana rehefa mamoaka didim-pitsarana ny mpitsara dia tokony miara-manaiky ny rehetra hoe izay ny marina. Fa mbola tsy izay aloha ny zavatra misy ankehitriny.
Ho fanadiovanany seham-pitsarana, hihatra amin’ireo mpitsara manao kolikoly sy tsy mitsara ara-drariny ny sazy. Ahazo tombotso akosa ireo mpitsara mahavita ny asany araky ny tokony ho izy sy voafaritry ny lalana.
Amin’ny mahara rafitra natao hanasazy azy na organce disciplinaire, dia tokony tsy miaro namana na amin’ilay hoe corporatisme satria izay mantsy no image hita aty ivelany ankehitriny. Dia izay ny zavatra tokony apetrantsika hoe mba tsy hisy an’izay intsony an. Mba tena hadio marina ny fitsarana. Ny minisitra ny fitsarana dia tokony tsy hisalasala mampiato amin’ny asany, manome ny ordre de poursuite, autorisation de poursuite, hanenjehana ireo mpitsara izay mitanila. Tsy tokony manasazy ihany anefa ny eto anivon’ny CSM fa tokony mijery ihany koa ny resaka promotion, resaka motivation an’ireo izay mpitsara manao ny asany araka ny tokony ho izy.
Mitaky ny hanaovan’ny fitsarana fanadihadihana sy ny fanarahana ny fitoriana hapetrakin’ny olom-pirenena tsirairay i Andry Rajoelina, nambarany ihany koa fa ho hafangainina ny raharaham-pitsarana rehetra manerana an’i Madagasikara.
Article précédentLa justice à Madagascar doit être remise à sa vrai valeur : plus de corporatisme, respect de l’éthique et de la règle déontologique d’après Andry Rajoelina
Article suivantLa justice doit être un rempart, mais la nôtre à Madagascar est trop souvent gangrenée par la corruption et les abus d’après le PRM Andry Rajoelina